नेपालमा फेरी जहाज दुर्घटना, चालक दलका दुवैको मृत्यु - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
नेपालमा फेरी जहाज दुर्घटना, चालक दलका दुवैको मृत्यु
Published On : २ जेष्ठ २०७५, बुधबार ११:३९
सम्पर्कविहीन मकालु एयरको सिंगल इन्जिन सेस्ना जहाज दुर्घटना भएको अवस्थामा भेटिएको छ।
मकालु एयरको ९ एन एजेयु कल साइन भएको उक्त जहाज तीन टुक्रा भएको अवस्थामा फेला परेको नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका अधिकारीले बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका बाम खर्कमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा जहाज फेला परेको हो।
जहाजमा चालक दलका क्याप्टेन किरण भट्टराई र को–पाइलट आदित्यनाथ नेपाल मात्र थिए। उनीहरु दुवैकाे मृत्यु भएकाे प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पाैडेलले नेपालखबरलाइ बताए।
जहाज खोजीका लागि गएको माउन्टेन एयरको हेलिकोप्टरले दुर्घटनास्थल पत्ता लगाएको उनले जानकारी दिए। माउन्टेन एयरका २ र नेपाली सेनाकाे १ हेलिकाेप्टर जहाजकाे खाेजीमा परिचालन भएका थिए।
सुर्खेत विमानस्थलबाट ६ बजेर १२ मिनेटमा उडेको उक्त जहाज सम्पर्कविहीन भएको थियो। पूर्व निर्धारित तालिकाअनुसार जहाज ६ः५५ बजे हुम्लाकाे सिमिकाेटमा अवतरण गर्नुपर्ने थियाे। विमानस्थल पुग्नुभन्दा ७.७ नर्टिकल माइल वरै जहाज डाँडामा ठाेक्किएर दुर्घटनाग्रस्त भएकाे हाे। दुर्घटना अघि जहाज १२ हजार ८ सय मिटरकाे उचाइमा उडिरहेकाे उनले बताए।